Waa maxay qaybta ugu muhiimsan ee Horumarka Page Landing Page?
Bogga soo degayaa waa hanti-iibsiyada shabakada dhexe. Haddii aad ku dadaalayso in aad gaadiidka ku sii wado website-ka, ka dibna waa lagama maarmaan inaad ogaatid sida loo dhiso bogagga soo degaya SEO-saaxiibtinimo. Maqaalkani waa isku day inaad ku sharaxdo sida ay xaq u leedahay in la furo bogga soo degitaanka ee mashruucaaga. Akhriso inaad akhriso si aad uga ogaato wax dheeraad ah oo ku saabsan horumarinta bogga. Aqoonsiga shakhsiyaadka iibsada
Cilmi-baarista isticmaalka ayaa qayb muhiim ah ka ah geedi socodka abuurista bogga soo degaya
. Sidaa daraadeed, waxaa lagugula talinayaa in aad marka hore aqoonsatid macaamiishaada mustaqbalka - cursos de iluminacion fotografia online. Go'aami noocee dadka isticmaala boggaaga. Ka feker baahidooda, garato waxa noloshooda ku adkeynaya kuna siin kara xal wanaagsan.
Abuuritaanka shakhsiyaadka (wakiilada la aaminsan yahay) ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu fahmi karo dhagaystayaasha aad beegsaneyso. Markaad sidaa sameysid, waxaad u aragtaa macaamiisha la qadaray. Markaad maskaxda ku haysid, fiiro gaar ah u yeelo sharaxaadda shuruudaha raadinta ay ku qoraan sanduuqa raadinta markaad raadineyso xalalka xallintooda. Sidoo kale, ka feker tirada tirada booqashooyinka ee aad ka filan karto raadinta kala duwan bil kasta.
Markaad haysato sawir macaamiisha mustaqbalka ah iyo sida ay u raadin karaan xalkaaga, waxaad bilaabi kartaa dhismahaaga bogga.
Ku dhaji boggaga adeegsadaha, ma aha qalabka raadinta
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee saameynaya doo- jarkaaga Google waa inta bini'aadamku ku qanacsan yihiin boggaga internetka,. Sida farsamadu muujinayso, website-yo weyn oo aan lahayn SEO ayaa ka fiicnaan doona kan xun ee leh SEO. Xasuuso qawaaniinta dahabka: waxaad samaynaysaa bogaga aadanaha, ma aha makiinadaha raadinta. Xooga saar in aad ku hagaajisid goobtaada isticmaalayaasha meesha ugu horeysa. Faa'iidada iyo rafcaanka badan ee bogga soo degaya waa, dadka ay u badan tahay inay ku riyaaqi doonaan. Ugu dambeyntii, wax horumarin ah oo ku saabsan boggaaga soo degaya ee loogu talagalay dadka isticmaala waxay yeelan doonaan saameyn cad oo mudo fog ah oo ku saabsan qiimeynta mashiinka raadinta.
Qaabdhismeedka dhismaha boggaga soo degaya
Your design page page waa in uu ka tarjumaa muhiimadda content. Taasi waa marka HTML-yada semantic ku yimaado. Taariikhda Semantic waxay dadka ka caawiyaan inay fahmaan nuxurka waxyaabaha aad bixiso. Xoghaynta HTML ee 'Semantic HTML' waxay keenaan martida inay u badan tahay in ay galaan oo ku qaataan wakhti dheeraad ah boggaaga. Tani, marka laga soo tago, waxay calaamad adag u tahay matoorada raadinta. Isticmaalayo fududeeyayaasha caadooyinka ah
Kumbuyuutar iyo ciriiri waa qalab awood badan oo aan ka caawinno oo kaliya SEO, laakiin sidoo kale waxay siisaa dadka iyo mashiinada aragti dheeraad ah. Shirkadaha gaaban, xog-wargalinta gaaban ayaa u ogolaanaya boggaga internetka in ay muujiyaan natiijooyinka raadinta Google si cad. Marka lagugu sameeyo cirfiidka, hubi in boggaaga soo degayaa uu shaqaynayo. Waxaad isticmaali kartaa "Console Console" si aad u ogaato weedhaha muhiimka ah ee aad ku dhex leedahay. Sidoo kale, qalabkan webmaster-ka ayaa tusaya kuwa ku xariira boggaaga iyo sidoo kale weydiimaha raadinta ay kuu dirayaan inta badan taraafikada.
Kuwani waxay ahaayeen aasaasihii horumarinta bogga soo degaya. Kadib sameynta bogga soo degaya iyo naqshadeynta waxyaabaha, waxaad u baahan doontaa inaad tijaabiso. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad ururiso xogta ugu badan ee suurtogalka ah. Khabiirada hooseeya waxay kugula talinayaan in ay isticmaalaan Google Analytics - adeeggan wuxuu u oggolaanayaa in uu kudhaqaaqo dabeecadaha iyo isugudbinta ilo gaar ah. Sidoo kale, Google Analytics waa mid ku habboon in la aqoonsado waxqabadka ugu fiican ee dadka soo galaya iyo meesha laga wanaajinayo.